अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा ३५ प्रतिशत बढ्यो - Aarthiknews
अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा ३५ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ३ करोड ५१ लाख खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसमम रू. २ करोड ६० लाख थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ३५ प्रतिशत बढी भएको हो ।
यस अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव शून्य २ र प्रतिशेयर नेटवर्र्थ रू. ११२ दशमलव ४६ छ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ६८ प्रतिशत बढी रू. ३ करोड ३३ लाख रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म यो रकम रू. १ करोड ९८ लाख थियो । बीमाकोष रकम पनि १४ प्रतिशत बढाएर रू. ४ करोड ८१ लाख पु¥याएको छ ।